एकाङ्की 'स्वास्थ्यकर्मी र गुणस्तरहीन पीपीई' - Online Majdoor
समाज साहित्य स्वास्थ्य
(कम्मर दुखेका एक किसान, आँखा जचाउनुपर्ने एक विद्यार्थी र प्रेसर एवम् सुगर रोगका कारण रगत परीक्षण गराउनुपर्ने एक युवकको जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भेट हुन्छ । )
किसान : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कोभिड–१९ लाई सामान्य रूघाखोकी र आफै बिलाएर जाने रोग भएकोले मास्क लगाउनुपर्दैन, लकडाउन गर्नुपर्दैन भन्थे, अहिले आफै कोभिड पोजिटिभ भएर हेलिकप्टरमा बसी सैनिक अस्पतामा भर्ना हुनुपर्‍यो !
विद्यार्थी : उनी ‘चिनियाँ भाइरस’ र ‘उहान भाइरस’ भनी कोभिडको उद्गमबारे चीनमाथि आरोप लगाउँथे । यथार्थ कोभिड अमेरिकाको हवाई टापुमा पहिलोपटक देखापरेको हो । चीनमा त अमेरिकीले नै फैलाएका हुन् ।
युवक : नेपालका सरकारहरूसँग नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्ने आँट नभएको कारण यहाँ पनि कोभिड सङ्‍क्रमण बढ्ने भयो । नेपालका सरकारहरू कति भारतपरस्त हुन् खै ?
किसान : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि कोभिड सङ्‍क्रमण फैलियो । अब त सरकारमा चेत आउला कि ?
विद्यार्थी : दाहाल निवास पूरै सङ्‍क्रमित भएपनि यिनीहरूमा चेत आउँदैन । ओली–दाहालको भेटघाट कोभिड रोक्न होइन, भागबण्डामा केन्द्रित छ ।
युवक : प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाका नेताहरूमा पनि कोभिड देखिएको हुँदा नेकाको केन्द्रीय समितिको बैठक नै स्थगित गरियो । अब त सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षले पनि दबाब देला कि ?
किसान : नेका, एमाले, माओवादीमध्ये जुनसुकै पार्टी सत्ता वा प्रमुख प्रतिपक्षमा भएपनि भागबण्डा गर्छन् । भर्खरै नेकाले पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति भाग लियो, कुम्ल्याउन पल्केकाहरू !
विद्यार्थी : विश्वविद्यालय र कलेज त नेका, एमाले र माओवादीको बपौती नै बनाइयो ! शिक्षाको गुणस्तर झन्झन् खस्किँदै छ । कलेजहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्रजस्तै छन् । यसको कारण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी उपकुलपति, प्रशासक, न्यायाधीशसमेत भएको समाचार अगाडि नै प्रकाशित भएको हो ।
युवक : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा रोजगारीका कार्यक्रमको अर्बौँ रूपैयाँ बजेट कसले खाए ? युवा जति कि खाडीमा, कि जेलको बन्दीमा छन् । बहुदलयताका सरकारहरूले स्वदेशमा रोजगारी दिन सकेनन् । नेका त पञ्चायतजस्तै भयो । कम्युनिस्ट दावी गरेका एमाले र माओवादी नेका र पञ्चायतभन्दा खराब पो भए त !
किसान : अस्पतालहरूमा कम्मर दुःखेपनि उपचार नहुने स्थिति भयो । कोभिडको कारण स्वास्थ्यकर्मी पनि त्राहीमाम् छन् ।
विद्यार्थी : नडराउनु पनि कसरी ! अहिलेसम्म ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स, ल्याबका) कोभिड सङ्‍क्रमित भए । गुणस्तरीय पीपीई, पन्जा आदि नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी सङ्‍क्रमित भएका हुन् ।
युवक : एक युवकले आफूले चिनेका एक ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालबाट घरसम्म पुर्‍याइदिएका थिए । त्यो ज्येष्ठ नागरिक कोभिड पोजिटिभ भए । कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेका ती युवकको नतिजा नआउँदै बाइक दुर्घटनामा परी खुट्टा भाँचियो । अस्पताल पुग्न नपाउँदै त्यस युवकको नतिजा कोभिड पोजिटिभ आयो । खुट्टा भाँचिएका त्यस युवकलाई अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा युवक घरमै ओछ्यानमा छन् ।
किसान : गुणस्तरीय पीपीई नभएरै चिकित्सकहरूले कोभिड पोजिटिभ बिरामीको उपचार गर्न नमानेको हुनुपर्छ । सरकार के गर्दै छ ? बन्दोवस्त गर्नुपर्दैन ?!
विद्यार्थी : सरकारमा रहेका नेताहरू नैतिक र दूरदर्शी हुन सकेनन् । सङ्घीय राजधानी दाङमा सार्नुपर्ने हो । सरकारी नेताहरूले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रूपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी सार्ने प्रस्ताव दर्ता गराउँदै छन् । ओली र दाहालले प्रदेशसभाको नाम र राजधानीबारे प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरेको गलत हो ।
युवक : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ सुरु गराइएको छैन तर एमडीको पढाइ अनुमति दिइयो । देशभरि नै एमडी कोटा वितरण गराई शिक्षामन्त्री र उनका नेताले यसमा ठूलै आर्थिक अनियमितता गरेको सुनिन्छ ।
किसान : के नेपाल भनेको काठमाडौँ उपत्यकामात्र हो र ? दु्रतमार्ग, फ्लाईओभर, बाहिरी चक्रपथ, सुख्खा बन्दरगाह सबै काठमाडौँमै बनाउनुपर्ने ! करिव १२ लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँमा फ्लाईओभरले गाडी जाम हट्दैन । जनसङ्ख्या र विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु नै उत्तम उपाय हो ।
विद्यार्थी : एमाले–माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा नेपाललाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेका थिए । तर, दुई वर्षयता मकै र धान क्रमशः ४५ र ५० अर्ब रूपैयाँको आयात गरे ! सरकारमा गएर चुनावी घोषणापत्र पूरा नगर्ने पार्र्टी अर्को चुनावमा अयोग्य हुने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ ।
युवक : गाडी जाम हटाउने अर्को उपाय सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने र निजी गाडीलाई नियन्त्रण गर्ने हो । दक्षिण कोरियामा अहिले फ्लाईओभर भत्काइँदै छ । नेपालमा बनाउने रे ! सरकारका मन्त्री र उच्च कर्मचारीहरू विदेशीको नक्कल गर्छन् । नेपालको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदैनन् । काठमाडौँ उपत्यकामा उपसहर आवश्यक छैन तर सरकार जनताको विरोध भएपनि बनाउने तयारी गर्दै छ ।
किसान : सांसद्, मन्त्री, ठूला कर्मचारी, उद्योगी–व्यापारी सबै काठमाडौँमा घर बनाउँछन् ! आफू जन्मेको र हुर्केको थातथलोलाई बिर्सन्छन् । यो स्थिति कायम रहेसम्म देश र जनताले सुःख पाउने छैनन् । साँझ पनि भयो अब छुटौँ कि !
युवक र विद्यार्थी : हुन्छ, छुटौँ !